Vehivavy 2 avy amin'ny finoana silamo, lany ho solombavam-boahaka any Etazonia
Ny talata lasa teo no notanterahana izany fifidianana izany ka nahalany an'i Ilhan Omar, tao Minesota sy Raichida Tlaib, tao Michigan.
Samy isan'ireny vehivavy mpandray andraikitra sy mpiady ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny finoana silamo ireny moa izy mirahavavy ireto. Fiovana lehibe eo amin'ny tantaran'i Etazonia izao fahalanian'izy mirahavavy ireto izao. Ny iray amin'izy ireo aza dia mbola manao ny voaly mampiavaka ny vehivavy silamo. Mpitsoa-ponena avy any Somalie i Ihan Omar, 36 taona, ary tsy nitsahatra ny niady ho an'ny zon'ny mpino silamo izy. Avy any Palestina kosa i Raichida Tlaib, 43 taona. Samy efa mizaka ny zom-pirenena amerikanina moa izy roa vavy ireto ary samy tao amin'ny antoko demôkraty no nahalany azy.